बालुवाको ठेक्का लागेन, चोरी तस्करीको चिन्तामा स्थानीय सरकार | Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper
बालुवाको ठेक्का लागेन, चोरी तस्करीको चिन्तामा स्थानीय सरकार
Published On : २८ पुष २०७६, सोमबार ०९:०६
आरुघाट गाउँपालिकाले बूढीगण्डकीको बिभिन्न बगरको नदीजन्य सामग्री उत्खनन गर्नेबारेकात्तिकमा टेण्डर आव्हान ग¥यो । कसैले पनि फार्म दर्ता गरेनन् । फेरि मिति मङ्सीरमा दोस्रो पटक सूचना आव्हान गर्यो । यसपटक झन् फाराम समेत कसैले किनेनन् । पुस २४ गते तेस्रो पटक फेरि सूचना आव्हान गरेको छ ।
गतबर्ष सो गाउँपालिकाले सोही शीर्षकमा करिब ४० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो । यो बर्ष ठेक्का नलागेपछि राजस्व गुम्ने र नदीजन्य सामग्री चोरी तस्करी नियन्त्रण गर्न नसकिने चिन्ता बढेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष पूर्ण दाहालले बताए ।
सिरानचोक गाउँपालिकाले गतबर्ष नदीजन्य सामग्री बेचेर ६० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो । तर यसबर्ष अहिलेसम्म टेण्डर सूचना नै प्रकाशन गरेको छैन । अजीरकोट गाउँपालिकाले पनि चेपे र दरौंदी नदीको ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खननका लागि तीनपटकसम्म सूचना जारी गरेको तर कसैबाट पनि दरखास्त नपरेको गाउँपालिकाकी उपप्रमुख चन्द्रमाया गुरुङ बताउँछिन् ।
बिगत बर्षमा ढुङ्गा, गिटी, बालुवा उत्खनन तथा बेचबिखनका लागि ठेक्का खोसाखोस हुन्थ्यो । पालिकाहरुले पनि नदीजन्य सामग्री बेचेर राम्रै राजस्व संकलन गर्ने गर्थे । तर यसबर्ष आर्थिक बर्षको छ महिना बित्न लाग्दा गोरखाका छ वटा गाउँपालिकामा नदीजन्य सामग्री उत्खनन् गर्न ठेक्का लागेका छैनन् ।
वैधरुपमा ठेक्का नलागेपछि यसबर्ष ढुंगा, गिटी, बालुवा चोरीतस्करी बढ्ने र आन्तरिक आम्दानी पनि घट्ने भन्दै भीमसेन थापा गाउँपालिकाका प्रमुख इश्वर पाण्डेले चिन्ता ब्यक्त गरेका छन् । ‘छ वटा घाटको सामग्री उत्खननका लागि टेण्डर गरियो, तर कोही पनि ठेक्का लिन आएनन्’, उनले भने, ‘विधिवत रुपमा ठेक्का नलगाएपछि अब रातारात चोरेर सिध्याउने भए ।’ अघिल्ला बर्षहरुमा ठेक्का लाग्दा पनि जति प्रयास गर्दा पनि चोरी नियन्त्रण गर्न नसकिएको उनले बिगतको अनुभव सुनाए । ‘ठेक्का लाग्दा त रातारात चोरी तस्करी हुन्थ्यो, अहिले झन ठेक्का लागेन । सम्हाली नसक्नु हुने सम्भावना छ’, उनले भने ।
शहीद लखन गाउँपालिकाले पनि त्रिशुली, मस्र्याङ्दी, बूढीगण्डकी र लुदी खोलामा गिटी, बालुवा उत्खननका लागि लगातार दुईपटक टेण्डर गरेको थियो । तर दुवै पटक टेण्डर फाराम किन्न कोही नआएपछि तेस्रो पटक टेण्डर नै नगर्ने अनस्थितिमा पुगेको त्यहाँका कर्मचारी मेघनाथ यादवले जानकारी दिए । गतबर्ष सो गाउँपालिकाले बालुवाको राजस्ववापत २० लाख रुपैयाँ आर्जन गरेको थियो ।
यसबर्ष राजस्व गुम्ने भन्दै गाउँपालिकाले चिन्ता ब्यक्त गरेको छ । नदीजन्य सामग्री उत्खनन गरेवापत राजस्व आर्जन गर्ने बारपाक सुलीकोट गाउँपालिकाको प्रयास पनि बिफल भएको छ । नदीको ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खननका लागि कसैले आवेदन नगरेपछि प्रति ट्याक्टर सातसय ५० का दरले खुद्रा बेच्ने तयारी गरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गौतम भण्डारीले जानकारी दिए ।
गोरखा नगरपालिका, पालुङटार नगरपालिका र गण्डकी गाउँपालिकाको मात्र घाटको ठेक्का लागेको छ । गोरखा नगरपालिकाको चारवटा घाट, पालुङ्टारको छ वटा र गण्डकी गाउँपालिकाको पनि छ वटा घाटको ठेक्का लागेको छ ।